Iza no tianao hiasa? | Martech Zone
Iza no tianao hiasa?
Zoma, Oktobra 2, 2009 Zoma, Oktobra 2, 2009 Douglas Karr
Niasa tsy niasa aho tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay mba tena hiala amin'ny tany ny orinasako. Andro no lany amin'ny tamba-jotra ary ny hariva / faran'ny herinandro dia lany amin'ny fanatanterahana ireo fanoloran-tena nataoko. Tsy mandeha lavorary izy ity fa mandroso. Amin'ity toekarena ity dia mety amiko izany.
Sales coaching dia nanampy kely - manampy ahy hahafantatra tsara kokoa izay ilain'ny mpanjifako, mametraka ny andrasana amin'izy ireo ary hanidy haingana mba tsy hisintona na hampihemotra ahy ny raharaha. Mihetsika haingana aho, kickin 'but ary mitondra anarana. Tsy nisy olona nanampy nanentana ahy mihoatra ny namako, na izany aza!
Androany izahay dia nanana fandresena lehibe. Orinasa roa izay niarahako niasa akaiky dia nanampy tamin'ny fanakatonana ny fotoana mety hampanantenaina miaraka amina mety ho taonina. Orinasa lehibe iray niarahako niasa nandritra ny fotoana elaela nanao sonia fifanarahana kely hitsapana ny fahaizantsika sy hahitana izay azonay atao ho azy ireo. Misaotra mandrakizay aho.
Nihoraka ny namako raha nandre ny vaovao! Ireo namako akaiky indrindra no nampahery ahy hatreto, nanentana ahy, nanohana ahy, nanome fitarihana ary tonga teo rehefa nila fanampiana aho. Mbola tsy nangataka a Hetezo ary aza manantena dime. Fantatr'izy ireo fa ny faharoa dia manana orinasa ampy hivezivezena aho, hiara-hiasa izahay.
Ny hafa kosa naka fomba hafa. Ny tena nampitebiteby indrindra dia orinasa iray iza aho izay tena miahy mafy ny hisintona ahy any ivelany ary manontany tena hoe maninona aho no tsy namidy ny vokatr'izy ireo. Taitra aho tamin'ny voalohany, ary tezitra be aho izao. Nandany ny folo taona lasa tany Indianapolis aho nanao izay ahombiazan'ireto orinasa ireto, nanampy azy ireo tsy andoavam-bola rehefa nanontany izy ireo, ary hampiroborobo azy ireo isaky ny afaka manao izany.
Tsy nampiroborobo azy ireo aho satria noheveriko fa hahazo vola kely amiko. Nataoko izany satria tiako ny mijery orinasa mahita fahombiazana, betsaka ny olona mahazo asa, ary mijery ny faritra mitombo. Namako izy ireo ary tiako ny namako hahomby.
Iza no tianao hiasa? Te-hanodidina ny tenanao amin'ireo olona sahirana mitazona isa ve ianao, manahy ny amin'izay tokony hividiananao azy, na izay ho azonao? Sa te hiara-hiasa amin'ny olona mahalala ianao fa arakaraka ny fahombiazan'ny tsirairay avy no hahatsara antsika rehetra amin'ny farany?
Ny marina dia hanana fotoana sarotra hampiroboroboana aho izany orinasa izany amin'ny manaraka ny marina tonga ny fotoana. Azoko izao fa izy ireo dia fitaovana fotsiny ihany no fahitan'izy ireo ahy 'hahazoana ny azy ireo'. Mandiso fanantenana izany saingy tsy maninona aho… Manana namana maro hafa izay nankasitraka ahy androany.
Hataoko izay hikarakarana ny namako aloha. Ireo olona ireo no tiako hiara-miasa.
Hadisoana manoratra 50 izay manenjika hatrany ireo bilaogera
Moa ve ny fanadihadiana ataonao dia manimba bebe kokoa noho ny tsara?
2 Okt 2009 amin'ny 6:29 PM
Tsara, Doug. Ny raharaham-barotra dia mihoatra noho ny raharaham-barotra. Fifandraisana izany.
3 Oktobra 2009 à 4:40
Sombiny lehibe Doug. Tsy afaka niombon-kevitra taminao intsony.
4 Okt 2009 amin'ny 9:30 PM
Arahabaina indray ny nahazo ny fahafahana, ho anao sy ireo namako hafa izay nandray anjara tamin'izany. Tena mampientam-po ny mahita ny orinasanao mitombo! Aza atao be loatra fotsiny ny mihantona @thebeancup miaraka aminay (ary hotazoniko ny mofomamy ho avy!).
5 Okt 2009 amin'ny 3:12 PM
Antenaina fa miaraka amin'ny fanampian'ity lahatsoratra ity, dia hiverina indray ny orinasa resahina. Ny fifandraisana dia manao izany indraindray.